Madaxweyne Farmaajo oo Sheegay in ay ka go'an tahay cirib-tirka Ururka Al-Shabaab | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Farmaajo oo Sheegay in ay ka go’an tahay cirib-tirka Ururka Al-Shabaab
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
MUQDISHO – Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad dher ka jeediyay munaasabadda daah furka maamulka hawada Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladaha amaanka dalka, howlgalada dalka looga saarayo SHabaabi iyo dhalinyarada ay marin habaabiyeen maleeshiyada Alshabaab.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ku celinayso fursad la siiyo dhalinyaradaasi la qalday si ay dib uga soo laabtaan qaladkooda,isagoo xusay in mar kale Dowladdu ay cafis u fidineyso haddii ay isa soo dhiibaan dhalinyarada ku jirta Arggigixisada Al-Shabaab.
Wuxuu sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo uu sheegay in dhalinyaradi ka faa’idaysatay fursadaha ay siisay Dowladda si wanaagsan loola dhaqmidoono ayna helidoonaan daryeel,maadaama ay ka soo noqdeen firkradihii qaldanaa oo ay ku shubeen Alshabaab.
Dowladda Soomaaliya ayuu sheegay madaxweynaha in ay ka go’antahay sidii guud ahaan dalka Soomaaliya looga ciribtiri lahaa maleeshiyada Alshabaab oo hortaagan horumarka umadda Soomaaliyeed.
Dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa horay ugu baaqday dhalinyarada Al-Shabaab ku jirta waxaana fursada dowladda ka faa’ideystay dhalinyarao badan iyo saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo dowladda isku soo dhiibay.
Wixii ka dambeeyey markii Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday in cafis loo fidiyay dhalinyarada ay qaldeen Alshabaab,waxaa sii kordhayay tirada ka soo baxaysa koxdaasi,kuwaasi oo isku soo dhiibaya dowladda Soomaaliya.